Bursa Hızlı Tren Projesi Bakanlar Kurulu Gündeminde – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa wuxuu ku yaal ajendaha Golaha Wasiirrada
04 / 11 / 2019 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
bursa degdega ah ee tareenka mashruuca ee golaha wasiirrada
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa wuxuu ku yaal ajendaha Golaha Wasiirrada; Guddiga Gaadiidka, oo ay samayso Mehmet Albayrak, Madaxa Laanta Bursa ee Rugta Injineerada madaniga ah, ayaa hadafkeedu yahay in la soo bandhigo oo la bixiyo talooyin hoos yimaada lenska gaadiidka magaalada.
In la soo dhaafay ...
Buundada Osmangazi waxaa laga saarayaa jidadka tareenka, hay'adda kaliya ee diidan dhawaqa dhawaaqa IMO, Gaadiidka tareenka ee Bursa wali waa ajandaha maanta.
Kulan aan ka qeyb galnay oo aan ku casuumeynay Madaxweynaha Guddiga Gaadiidka M. Tözün Bingöl, waxaan dhegeysanay si xamaasad leh doodaha tareenka iyo fikradaha la soo gudbiyey. Waxaan qiimeyn ku sameynay Albayrak iyo xubnaha guddiga.
Dr. Osmangazi University, waaxda injineerinka madaniga ah, Eskişehir, oo loo aqbalay inay tahay amar dhanka gaadiidka, gaar ahaan tareenka. Waxaan kulankaan kula yeelanay 'Caak Bilgiç'.
Maxaa yeelay xaaskiisa waxay ka timid Mudanya, waxay ku nooshahay Bursa. Qiimaynta Bilgic waa muhiim.
Soo bandhigida uu diyaariyay M. Tözün Bingöl, Gudoomiyaha Gudiga Gaadiidka, oo daboolay mashruuca tareenka ee Bursa oo isna si buuxda loo soo qaatay ayaa sidoo kale ahaa mid cajiib ah.
Muhiimadu waxay ahayd:
Gaadiidka tareenka, tareenada xawaarehoodu ka sarreeyo kiiloomitir 250 saacaddiiba waxaa loo yaqaan xawaare sare iyo kuwa ka hooseeya xawaaraha kiiloomitir 250 waxaa loo yaqaanaa xawaare. Tareennada ku habboon xNUMX kiiloomitir ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay yihiin Jaangooyooyinka Sare ee 'High Standard Railway', oo ah nooc la wanaajiyey oo khadka tareenka caadiga ah.
Waxaan ka dhawaaqnay sadarradan in khadka Bursa laga soo qaaday dariiqa dhakhsaha leh ee loo maro Wadada Tareenka Sare iyadoo dib u eegis lagu sameeyay TCDD lagu sameeyay Xisaabaadka Maalgashiga 2019 bishii Agoosto.
Waxaan ka baranay Guddiga Gaadiidka IMO in rajo cusub ay ka soo muuqatay Ankara isbedelka nooca oo dhaliyay niyad jab baahsan oo ka jirta Bursa.
Sidaa darteed, Buna
Shaqada Wasaaradda Gaadiidka ee mashruuca si dhaqso leh loogu sameeyo tareenka ayaa mar kale timid ajandaha Golaha Wasiirrada. Qandaraaska cusub ayaa loo qaban doonaa iyadoo la waafajinayo suurtagalnimada miisaaniyadda.
Halkaa marka ay marayso, u ololeeyaha Bursa wuxuu muhiimada siinayaa.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyada magaalada, gaar ahaan sida hay'adda ugu sarreysa uguna waxtarka badan siyaasiyiinta BTSO'nun waa inaysan ka tagin taageero culus.
Markaan nahay Bursa waxaan u baahan nahay inaan muujino inaan dooneynay tareen xawaare sare leh
Balıkesir wuxuu aaday TCDD tareenkayaga
Marka hore… Waxaan akhrinaa wararka ku saabsan ku xirida Bursa tareenka xawaaraha ku socda ee wargeysyada Çanakkale. Waxaan ku aragnay warka joornaalada Balıkesir sabtidii warbaahinta Bandırma shalay.
Waxyaabaha soo socda ayaa loo qoray:
Balıkesir AK Party ku xigeennada Yavuz Subaşı, Adil Celik, Mustafa Canbey, oo ku xigta Duqa magaalada Yücel Yilmaz iyo Duqa Magaalada Dinçer Orkan TCDD Agaasimaha Guud Ali İhsan Uygun ayaa booqday.
Warbixinta ayaa sheegtay in Ankara-Bursa-Bandırma tareen xawaare sare lagu duubi doono 2021.
Dr. Soo jeedin xasaasi ah oo laga keenay Şafak Bilgiç ee xarumaha tareenka xawaaraha ku socda iyo khadka T2
Jaamacada Osmangazi, waaxda injineerinka bulshada, Eskişehir. Şafak Bilgiç waa mid ka mid ah magacyada loo tixgeliyo inay yihiin hay'ad gaar ahaan gaadiidka tareenka.
Iyadoo hal lug ah Bursa. Şafak wuxuu soo jeediyey laba mashruuc oo gaadiid:
Bal keli Balat saldhigga tareenka kuma filna Bursa. Waxaan ku qasbay ardaydeyda inay baaritaan sameeyaan. Waa in la helaa xarun kale oo ku ag taal tareenka iyo agagaarka Kazıklı ee aagga Yıldırım. ”
Vakit Ma ahan waqtigii la heli lahaa khadka tareenka T2 ee dhulka hoostiisa mara. Waa in loo rogaa nidaam tareen fudud oo dhulka hoostiisa mara. ”
Wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay:
Bile Xitaa haddii ay ka sarreyso dhulka, waa inuu u rogaa nidaam tareen oo fudud kuna xirnaadaa Bursaray. Waa ku filan tahay in la kordhiyo joogsiga. Shaqada xawaareynta ayaa sidoo kale ah mid aad u dhakhso badan. Dabaqadda la taaban karo ma'aha shuruud, laakiin khadka ayaa dhakhso loo sameeyaa.
Wuxuu ku daray:
Tareenka gawaarida taraamka ah ee lagu iibsaday xaruntan waxaa lagu qiimeeyaa qaybaha kale ee magaalada mana lumi doonaan. ”
Boostada ayaa laga saaray tunnel-ka halkii la sudhay
Kuwa ka tallaabaya Wadada Istanbul ee jihada magaalada Ankara ee u socota garaacida Wadada 'Ring Road' oo isha ku haysa albaabka Demirtaş Tunnel iyo hortiisa hortiisa.
Iridda laga soo galo tunelka…
Laga bilaabo maalinta koowaad ee shaqada waxaa jiray calaamad Tareenka Xawaaraha Sare. Si kastaba ha noqotee, Barnaamijka Maalgashiga TCDD 2019 wuxuu ka saaray saxeexa ka dib markii mashruuca laga saaray qaybta tareenka xawaaraha sare.
Jimcihii, waxaan aragnay isagoo mar kale laalaadaya oo waxaan rajeyneynay.
Si laguugu dhawaaqo hindisada iibsiga 106 xirmooyinka tareenka xawaaraha sare…
TCDD Konya - Mashruuca Khadka tareenka ee Karaman waxaa go'aamiya Golaha Wasiirrada acil
19 November Golaha 1940 waxaa ka go'an adeegsiga birta ...
Maanta Taariikhda: 4 Diseembar 1929 waxay go'aansadeen in ay isticmaalaan qulqulayaashii qoryaha.
Tareenka xawaaraha sare ee Ankara Bursa Bandirma
Mashruuca tareenka ee Bursa
T2 khadka taraamka
Barnaamijka Maalgashiga TCDD 2019